Dhageyso:-Banaanbax ka dhacay Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dhageyso:-Banaanbax ka dhacay Muqdisho
written by warsan radio 06/07/2017
Taliska Militariga Soomaaliya ayaa muddo Saddex cisho ah waxa ay u qabteen dadka rayidka ah ee degan dhismayaasha ay leeyihiin ciidanka Xoogga dalka Somaliya ee ku yaalo Magaalada Muqdisho.
Gaadiid Cabdi Bilayaal ah oo ay leeyihiin ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya, laguna soo xiray cod baahiyaal ayaa lagu arkaayay nawaaxiga Wasaaradda Gaashaandhiga, Xaafadda Shiirkoole iyo goobo kale, waxaana dadka lagu amrayay inay ka guuraan guryaha ciidanka.
Amarkaasi ka soo baxay Taliska ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta Banaanbax looga soo horjeedo in dadka rayidka ay ka guuraan goobaha ciidanka wuxuu ka dhacay nawaaxiga Wasaaradda Gaashaandhiga, iyaga oo dadka gubaayay taayaro.
Qaar ka mid ah dadkii Banaanbaxa dhigayay ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin meesha ay aadi doonaan, maadaama in ka badan 20 sano ay degaansanayeen dhulkaasi.
Dad badan oo shacab ah ayaa degaansaday xeryaha ciidanka iyo guryihii loogu talo galay ciidamada, wixii ka dambeeyay bur burkii dowladdii dhexe, illaa hadddana dadkaasi waa ay dagan yihiin.
Dhageyso:-Banaanbax ka dhacay Muqdisho was last modified: July 6th, 2017 by warsan radio